ကရင်ပြည်နယ် အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန သည် ကော့ကရိတ်ခရိုင်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန နှင့် ပူးပေါင်း၍ ကော့ကရိတ်မြို့ရှိ ဆေးဆိုင်များအား ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခဲ့ပြီး ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးရန် ဆေးဝါးနမူနာများ ဝယ်ယူခြင်း (၁၁-၁၂-၂၀၂၀) - Food and Drug Administration, Myanmar
Food and Drug Administration, Myanmar
Quality, Safety and Protection
Special Food (SF)
Food Additives (FA)
Bottled Drinking Water (BDW)
Milk & Milk Products (M&M)
Frozen Food (Fr F)
Functional Food (FF)
Fat & Oil (F&O)
Cosmetic & Medical Device
ကရင်ပြည်နယ် အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန သည် ကော့ကရိတ်ခရိုင်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန နှင့် ပူးပေါင်း၍ ကော့ကရိတ်မြို့ရှိ ဆေးဆိုင်များအား ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခဲ့ပြီး ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးရန် ဆေးဝါးနမူနာများ ဝယ်ယူခြင်း (၁၁-၁၂-၂၀၂၀)
December 11, 2020 January 11, 2021 admin
(၁၀.၁၂.၂၀၂၀) ရက်နေ့တွင် ကရင်ပြည်နယ် အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန သည် ကော့ကရိတ်ခရိုင်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန နှင့် ပူးပေါင်း၍ ကော့ကရိတ်မြို့ရှိ ဆေးဆိုင်များအား ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခဲ့ပြီး ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးရန် ဆေးဝါးနမူနာများ ဝယ်ယူခဲ့ပါသည်။
← ကယားပြည်နယ် ရှားတောမြို့နယ်အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကြီးကြပ်ကွပ်ကဲရေးကော်မတီဝင်များနှင့်အတူ ရှားတောမြို့ဈေးတန်းရှိကုန်စုံဆိုင် (၁၅)ဆိုင်အား ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း (၈.၁၂. ၂၀၂၀)
(၁၄-၁၂-၂၀၂၀) ရက်နေ့တွင် ထုတ်ယူနိုင်သော ဆေးပစ္စည်းတင်သွင်းခွင့်မှတ်တမ်းတင် လက်မှတ်များ →
COVID 19 ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေး အမျိုးသားအဆင့်ဗဟိုကော်မတီ သို့ စေတနာရှင်ကုမ္ပဏီများ၊အသင်းအဖွဲ့များ၊ တစ်ဦးချင်းအလှူရှင်များက အလှူငွေနှင့်ဆေးရုံသုံးပစ္စည်းများပေးအပ်ခြင်းအခမ်းအနားသို့ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် တက်ရောက်ခြင်း
တိုင်းရင်းဆေးပညာဦးစီးဌာန တိုင်းရင်းဆေးဝါးစက်ရုံ အကြံပေးအဖွဲ့ နှင့် Video Confrencing ဖြင့်ဆွေးနွေးပွဲသို့ ညွန်ကြားရေးမှူးချုပ်တတ်ရောက်ခြင်း
တားမြစ်စား​သောက်ကုန်နှင့် တားမြစ်အလှကုန် ရောင်းချနေခြင်း တို့အား ဈေးကွက်ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း
Pyigyi Zayyar Road,(in front of Sabel Housing)
Zayyar Thiri Ward, Zabu Thiri Township,
Email : fda@mohs.gov.mm , fdanpt1@gmail.com
Phone : 067-403609
Copyright © 2020 Food and Drug Administration, Myanmar. All rights reserved